I Joseph Stiglitz: « Ndao hialana ny harinkarena faobe mahazatra » | NewsMada
I Joseph Stiglitz: « Ndao hialana ny harinkarena faobe mahazatra »
« Tsy maintsy manana fomba fijery vaovao ho fanarenana ny toekarena isika rehetra aorian’izao valanaretina izao, hialana amin’ny fomba mahazatra hatramin’izay, miteraka fiangarana sy tsy fitoviana », hoy i Joseph Stiglitz, teratany amerikanina, nahazo ny Prix Nobel toekarena 2001. Vahaolana ny fanarenana hisorohana ny tsy fitoviana, izay tsy hita soritra ao anatin’ny harinkarena faobe (PIB). “Ndao hialana ny harinkarena faobe mahazatra, tsy voakajy ny fampandrosoana maharitra », hoy izy.
Taona maromaro izao, tsy azo atao ambanin-javatra ny fiovan’ny toetr’andro sy ny fiantraikan’izany mandavantaona. Tsapa fa mihasarotra ny fanarahana ny fiovan’ny toetr’andro. Tsy fandrefesana ny PIB intsony ny ahitana ny marina momba ny toekarena. Tsy nisy niomana amin’izao fihanaky ny valanaretina Covid-19 izao ny maneran-tany.
“Raha niomana, tsy hoe afaka nisakana ny valanaretina akory fa afaka nisedra azy. Feno fanantenana amin’ny toekarena maitso aho, ary tokony hotohizan’ny rehetra ny asa mifandraika amin’izay ka tsy hisy intsony ny CO2 mialoha ny taona 2050. Azo tanterahina tsara izany », hoy ihany i Joseph Stiglitz.
Izay ny tanjona fa tsy maintsy atomboka amin’ny fandaniam-bola, toy ny efa atao amin’ny Covid-19 izao. Ampiana ny olona hiova sehatrasa, toy ny fivarotana fitaovana mamokatra herinaratra avy amin’ny masoandro. Tsy atao sakana ny mahalafo izany ankehitriny raha mijery lavitra. Ireo maro miaina ao anatin’ny fahantrana amin’izao fotoana izao, ho tsara fiarovana sy fanampiana ahafahan’izy ireo mitrandraka sehatra hafa tsy manimba ny tontolo iainana.